Yehowa Bɛma Kwan Ma Kristoni Ano Aduan Abɔ no Da Bi? | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mongolian Moore Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Dawid asɛm a ɛwɔ Dwom 37:25 ne nea Yesu kae a ɛwɔ Mateo 6:33 no kyerɛ sɛ Yehowa remma Kristoni biara ano aduan mmɔ no da anaa?
Dawid kyerɛwee sɛ onhuu “onipa trenee a wɔagyaw no, anaasɛ n’asefo srɛ aduan.” Ɔno ankasa suahu na ɛma ɔkaa saa asɛm no. Na onim paa sɛ Yehowa nsa nyɛ tiaa wɔ n’asomfo so. (Dw. 37:25) Nanso Dawid asɛm no nkyerɛ sɛ Yehowa akoa biara nni hɔ a obedi hia.
Ɛtɔ da a na Dawid ankasa ho kyere no. Wo deɛ yɛnhwɛ bere a Dawid guan fii Saul anim no. Na Dawid ho nneɛma asa enti ɔkɔsrɛɛ aduan a ɔne mmarima a wɔka ne ho no bedi. (1 Sam. 21:1-6) Enti yɛbɛka a, Dawid ‘srɛɛ aduan.’ Nanso saa bere no mpo na onim sɛ Yehowa rempo no. Nokwasɛm ne sɛ Bible nka wɔ baabiara sɛ na Dawid kyin srɛsrɛ aduan ansa na ne nsa akɔ n’ano.
Yesu nso kae wɔ Mateo 6:33 sɛ, sɛ obi de Ahenni nneɛma di kan wɔ n’asetena mu a, Onyankopɔn bɛma ne nsa aka nea ohia biara. Yesu tuu n’akyidifo fo sɛ: “Monkɔ so nhwehwɛ ahenni no ne Onyankopɔn trenee kan, na ɔde nneɛma a aka yi nyinaa [te sɛ aduan, anonne, ne atade] bɛka ho ama mo.” Nanso Yesu san kae sɛ nkurɔfo bɛtaa ne “nuanom” na ebia wɔadi kɔm mpo. (Mat. 25:35, 37, 40) Biribi saa too ɔsomafo Paulo. Ɛtɔ da a na nea obedi ne nea ɔbɛnom mpo abɔ no.—2 Kor. 11:27.
Yehowa aka sɛ nkurɔfo bɛtaa n’asomfo wɔ akwan horow so. Ebia ɔbɛma kwan ma yɛn ho akyere yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a obenya asɛm abua Ɔbonsam. (Hiob 2:3-5) Eyi ho nhwɛso ne nea ɛtoo yɛn nuanom a na wɔda Nasi nneduaban mu no. Tebea yi de anuanom pii nkwa too asiane mu. Atirimɔdensɛm a na atumfoɔ no de di Adansefo no bi ne sɛ na wɔkyere wɔn kɔm sɛnea wɔn gyidi begu asu. Nanso yɛn nuanom dii Yehowa nokware, na ɔno nso ampa wɔn. Ɔmaa kwan maa wɔfaa ɔtaa no mu, na saa ara na ɔma kwan ma yehyia sɔhwɛ ahorow nnɛ. Nanso Yehowa boa wɔn a ne din nti wohu amane no ma wogyina pintinn. (1 Kor. 10:13) Yɛmma asɛm a ɛwɔ Filipifo 1:29 yi ntena yɛn adwenem: “Mo na Kristo nti wɔde hokwan no maa mo, na ɛnyɛ sɛ munnya ne mu gyidi nko na mmom sɛ munnyina n’ananmu nhu amane nso.”
Yehowa ahyɛ ne nkoa bɔ sɛ ɔrennyaw wɔn da. Yesaia 54:17 ka sɛ: “Akode biara a wɔbɛyɛ de aba wo so no renyɛ yiye.” Saa asɛm yi ne bɔhyɛ pii a ɛwɔ Bible mu no ma yehu sɛ Onyankopɔn bɛbɔ n’asafo ho ban. Nanso ɛtɔ da a n’asomfo bi hyia sɔhwɛ anaa ɔtaa ahorow; ebinom mpo de wɔn nkwa twa so.
Nsɛmmisa a Efi Akenkanfo Hɔ—September 2014